Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1012
Lomano – Afrique 2016 : hiroso amin’ny fifaninanana tsapa farany ny FMN
Par Taratra sur 23/02/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Hiatrika fifaninanana iraisam-pirenena hafa isika eo amin’ny taranja lomano, ankoatra ny Lalao Olympika 2016 (J.O) any Rio, Brezila. Raha ny fandaharam-potoan’ny federasiona mantsy, anisan’ny hetsika iraisam-pirenena goavana hatrehin’i Madagasikara ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika. Fifaninanana hotanterahin’ny kaonfederasiona afrikanina any Bloemfontain, Afrika Atsimo, ny 2 – 9 oktobra 2016. Araka ny fanazavan’ny tompon’andraikitra ara-teknikan’ny federasiona malagasy […]
Kitra afrikanina : nahazo fahafahana ny mpilalaon’i Centrafrique
Tafaverina ao anaty fifaninanana iraisam-pirenena indray ny Repoblika demokratikan’i Centrafrique. Nesorin’ny mpitondra any an-toerana mantsy ny sakana tsy nahafahan’izy ireo niatrika izany. Nisento tokana ny mpilalaon’ny Les Fauves, ekipam-pirenen’ny Repoblika demokratikan’i Centrafrique, eo amin’ny taranja baolina kitra. Nesorin’ny mpitondra any an-toerana mantsy ilay didy nametra azy ireo, amin’ny fandraisana anjara amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena. Raha tsiahivina, […]
Tsy fandriampahalemana : notafihin’ny jiolahy i Dadafara Hiragasy
Par Taratra sur 23/02/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Ny asabotsy hifoha alahady teo, notafihin’ny jiolahy mahatratra 6 ny trano fonenan’i Dadafara Hiragasy (Dadafara Lt Production) etsy Ambodin’Isotry. « Namaky ny varavarana sy nanao amboletra ny telo, fa ny telo hafa niambina ny fokonolona mba tsy ho afaka hamonjy anay », hoy i Dadafara. Tsy maintsy nanohitra ireo jiolahy teo am-baravarana ity mpikarakara momba ny hiragasy […]
Tsararafa sy Ambatolampy : notoloran’ny Marao boky ny CEG
Nanolotra boky amin’ny teny malagasy sy anglisy 135 ho an’ny CEG, ao amin’ny kaominina Anosy Tsararafa sy Ambatolampy, distrikan’i Farafangana ny Association Marao. Manampy betsaka ny mpanabe ny fahatongavan’ny boky amin’ny fanomanana ny lesona ho an’ny mpianatra. « Nanana boky ihany ny sekoly teo aloha fa misy mangalatra, vitsy rahateo ny CEG manana trano famakiam-boky hanampy […]
Eau vive : ilain’ny hopitaly amin’ny famerenan-drano ny zaza
Par Taratra sur 23/02/2016 Divers, NS Malagasy
Mila famerenan-drano ny iray ampahadimin’ny zaza raisina an-tanana ao amin’ny hopitalin’ny reny sy ny zaza Tsaralalàna, vokatry ny fivalanana sy ny fandoavana avokoa, hoy ny talen’ny hopitaly, profesora Robinson Annick, omaly, teny Tsaralalàna. Ankoatra izay, ilaina amin’ny ronono ho an’ny zaza menavava tsy afa-minono amin’ny reniny ny rano Eau vive afangaro amin’ny vovo-dronono. Isam-bolana, manome […]
Mitsinjo hatrany ny mpianatra ao amin’ny FJKM Tsitohaina Rtoa Andriantsitohaina Ginette sy ny vadiny. Faly ny mpianatra nitondra sakafo sy kilalao. Nahatsiaro ireo mpianatra ao amin’ny sekoly FJKM Tsitohaina Ambohijanahary Antehiroka ny malala-tanana, Andriantsitohaina Ginette, omaly. Mahatsapa ny fahasahiranan’ny ray aman-dreny amin’ny fampianaran-janaka izy ka nitondra vatsy ho an’ny kilongan’ny sekoly. Vary hatao sakafo atoandro, […]
Vakinankaratra : hifaninanana ny fambolen-kazo
Samy miezaka manefa ny adidiny amin’ny fambolen-kazo ireo fikambanana sy sokajin’olona samihafa any Vakinankaratra, indrindra fa ny ao Antsirabe renivohitra. Taorian’ny Fiova, nanatanteraka ny azy koa ireo miaramila sy zandary avy ao amin’ny fari-piadidia-miaramila ao Vakinankaratra, nampian’ireo sivily miasa ao anivony avy, ny faran’ny herinandro. Tao amin’ny Akademia miaramila, ny Sekoly mpampiofana ho manamboninahitra lefitra […]
Kere any atsimo : mila sakafo maika milanja 500 taonina
Anisan’ny vahaolana maika hamonjena ny mponina ny famatsiana ara-tsakafo, taorian’ny fihaonam-bem-pirenena nijerena ny vahaolana maharitra hamahana ny krizin’ny hanoanana any atsimo. Sakafo mitondra hery sy tanjaka milanja 500 taonina sy rano no tena vonjy aina ilain’ny mponina any atsimo. Iandraiketan’ny BNGRC ny fitsinjarana izany sakafo izany. Maherin’ny 350.000 kosa ny olona tena hisitraka io vatsy […]
Par Taratra sur 23/02/2016 Economie, NS Malagasy
Amin’ny 20 marsa ho avy izao, hankalaza ny Andron’ny Frankofonia ireo rehetra avy amin’ny kaontinanta dimy mampiasa sy miteny frantsay. Hankalazaina amin’ny endriny maro samihafa izany eto Madagasikara, eo amin’ny sehatry kolontsaina fa indrindra, eo amin’ny lafiny fihariana. Amin’izay fihariana izay indrindra no hanomezana toerana ny « Zoma de la francophonie », hatao ny 23 sy 24 […]
Ady amin’ny tsy fandriampahalemana : kely ny tetibolan’ny Zandarimaria nasionaly
Nanatanteraka, toy ny fanaon’izy ireo isan-taona, atrikasa miompana amin’ny fitantanana ny tetibola ampiasainy ireo zandary manamboninahitra misahana ny raharaha manerana ny Nosy nandritra ny herinandro lasa teo, tao Antsirabe. Nitarika ny atrikasa ny Jeneraly roa, tompon’andraikitra voaloahany misahana ny fitantanam-bola ao amin’ny zandarimaria nasionaly. Nandray anjara tamin’izany koa ireo teknisiana avy ao amin’ny minisiteran’ny Fitantanam-bola […]
Ny zanany sy ny vinantony ihany no nahavanon-doza… : maty novelesina hazobe izy mivady ray aman-dreniny
Par Taratra sur 23/02/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Olam-pianakaviana, noho ny resa-pasana sy vola, niafara tamin’ny vonoan’olona ity nitranga, teny Fierenana, Anjozorobe, herinandro vitsivitsy lasa izay. Ny zazany roalahy sy ny vinantony ihany no nahavanon-doza namono nahafaty azy mivady lehibe ray aman-dreniny. Resa-pasana sy vola 10 tapitrisa Ar nahavitan’ireto olona telo namono ny ray aman-dreny be, loharano nahitana masoandro. Tany Fierenana Anjozorobe nitrangan’ity […]
Fandraharahana : toerana manana ny lanjany ara-toekarena Ihosy
Notokanana ny 17 febroary teo tany Ihosy, faritra Ihorombe, ny masoivohon’ny banky BFV-SG, faha-49. Nahatonga ity safidy ity ny fananan’Ihosy lanja ara-toekarena sy ara-pifandraisana manokana, ka hanatonana bebe kokoa ny mpanjifa. Ihaonan’ny toerana maro any amin’ny tapany atsimon’ny Nosy any Ihosy. Mampihaona faritra maro, toy ny any Ranohira, Isalo, ireo tanàn-dehibe andalovan’ny lalam-pirenena sy lalana […]
Par Taratra sur 23/02/2016 En Bref, NS Malagasy
Haverina ny lazan’ny faritra Melaky eo amin’ny fambolena. Hisy, noho izany, ny fanamboarana tohodrano lehibe afaka manondraka tanimbary mirefy 1800 ha manerana ny distrikan’Antsalova, miampy 1800 ha hafa any amin’ny distrikan’i Maintirano. Manomboka amin’ny volana avrily izao ny asa. Ankoatra izany, hisy koa ny fanarenana ny tohodrano efa nisy taloha ao amin’ny kaominina Betanatanana. Miaraka […]
Fambolena : 5 % ihany ny tantsaha mahazo famatsiam-bola
Tsy misy afa-tsy 5 % amin’ny tantsaha mpamboly ihany, raha be indrindra, mahita famatsiam-bola amin’izay asa ataony. Tsy hita manampy firy ny mpamboly sy mpiompy ireny mpamatsy vola madinika any amin’ny kaominina maro ireny. Na mahazo vola amin’ireny ireo olona ireo, ny zana-bola mbola ambony loatra ka matetika tsy tafavoaka izy ireo. Ny tokony ahitan’izy […]
Lalam-pirenena sy famatsian-drano : asa goavana, midika ho famatsiam-bola goavana
Tetikasa iray lehibe, nofaritana tany Ambovombe ny fanamboarana ny lalana RN 10 sy RN 13. Ny RN 10, manomboka eo amin’ny sampanana Andranovory (RN7) hatrany Betioky Atsimo mirefy 82 km. Avy eo Ihosy kosa ny RN 13 mamakivaky ny any atsimo mandalo an’i Beraketa sy Betroka mivoaka any Ambovombe. Betsaka ny asan-dahalo amin’iny lalam-pirenena iny. […]
Par Taratra sur 23/02/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Nitondra fanazavana ny amin’ny hiatrehana ny fifidianana, indrindra ny fifidianam-paritra ny eo anivon’ny Ceni. Nambaran’izy ireo fa tompon’andraikitra voalohany amin’izany ny fanjakana. “Tsy avy aty amin’ny Ceni ny fanapahanna momba ny fanaovana fifidianana, fa any amin’ny fitondram-panjakana izay zavatra izay.” Tenin’ny filohan’ny Ceni, Rakotomanana Hery, teny Anosy, ny faran’ny herinandro teo, io, manoloana ny […]
An-kitsim-po : tsy zava-baovao ireo tetikasa
Tsy zava-baovao eto amin’ny firenena ny famaritana karazana tetikasa ataon’ny fanjakana any atsimo. 21 izao no tapaka nandritra ny fivoriana roa andro natao tany Ambovombe, ho fanavotana iny faritra iny amin’ny kere. Ny olana anefa, matetika tsy vita ireny tetikasa ireny noho ny antony maro. Anisan’ny namatsy volabe ho an’ny famatsian-drano ny faritra Androy ny […]
Famonjena ny faritra Androy : takina ny fiaraha-miasan’ireo minisitera sy fanaraha-maso
Vita ny faran’ny herinandro teo, ny 19 sy 20 febroary, ny atrikasa natao tany Ambovombe nijerena izay vahaolana hamonjena ny any Androy manoloana ny kere. Maro ireo mpikambana ao amin’ny governemanta niara-nanao sonia ny fehinkevitra tapaka tamin’izany eo amin’ny lafiny toekarena sy sosialy. Samy mandray izay tandrify azy ireo minisitera isan-tokony. Andrasana ny hitohizan’ny fiaraha-miasa […]
Fitantanana ny firenena : mitaky ny fisokafan’ny mpitondra ny Tim
« Mamono tena ny fitondram-panjakana nahazo salan’isa 64% raha betsaka indrindra tamin’ny fifidianana nefa mitady hifehy irery ny fitantanana ny firenena. Tsy misokatra amin’ny fiaraha-miasa », hoy ny filoha nasionalin’ny antoko Tim, Ravalomanana Marc, omaly tetsy Ampandrana. Nohitsiny fa vonona hatrany ny antokony sy ny tenany ny hifanome tanana amin’ny filoha Rajaonarimampianina. Etsy andaniny, nitondrany ny heviny […]
Trafikan’andramena : tsy handefitra ny Praiminisitra
« Tsy handefitra ny tompon’andraikitra manoloana io resaka fanondranana an-tsokosoko andramena io. Handraisana fepetra hentitra izany », hoy ny Praiminisitra Ravelonarivo, omaly, teny Mahazoarivo. Nambarany fa efa hitsangana tsy ho ela ny fitsarana hisahana ity raharaha andramena ity. Miandry ny didy fampiharana izany sisa, araka ny fanamafisany. « Handray an-tanana ny raharaha rehetra io fitsarana io. Efa misy […]
Toamasina : vehivavy nahatrarana rongony 46 kg
Saron’ny polisy tao Tanambao fahadimy Toamasina, ny alakamisy teo ny renim-pianakaviana iray 53 taona voarohirohy ho nanao trafikana rongony milanja 46 kg sy 250 g tao an-tranony. Araka ny fanazavan’ny polisy, tamin’ny alalan’ny loharanom-baovao iray no nahafahana nanao ny fisamborana ity renim-pianakaviana voarohirohy ity. Voalaza fa avy any Ifito ny fiaviany, kaominina malaza amin’ny fambolena […]
Fiaraha-miasa : depiote telo lasa atsy Kaomoro
Vehivavy solombavambahoaka malagasy telo no nosafidian’ny eo anivon’ny Vaomiera ranomasina Indianina (COI) handray anjara amin’ny fanaraha-maso ny fifidianana filoham-pirenena, fihodinana voalohany, atsy amin’ny nosy Kaomoro, ny 21 febroary lasa teo, izay nisy kandidà mpifaninana miisa 25. Eo ny solombavambahoaka voafidy tany Ambato Boeni, tamin’ny anaran’ny Antoko Malagasy miara-miainga (AMMM), Rasoaherinjatovo Bodovoangy Dimitrine; ny solombavambahoaka voafidy […]
Hotanterahina amin’ity herinando ity ny fifidianan’ny mpanao gazety ny solontenany handrafitra ny Filankevitra ambony ho an’ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna. Fantatra fa 10 ireo kandidà hifaninana amin’izany. Anisan’ny rafitra voalazan’ny lalàmpanorenana ny hananganana azy io ary ahitana solontena avy amin’ny sehatra samihafa. Andrasana amin’ity herinandro ity ny ho valin-tenin’ny HCC momba ny […]
Mpamily taxi iray, hita faty tao anatin’ny fiarany ihany, teny amin’ny By Pass ny alahady teo. Feno ra tao anaty fiara, ary nahitana diana kapoka teo amin’ny lohan’ilay mpamily. Tsy fantatra izay namono, fa olona nandalo ny nahita azy niankohoka tao. Noheverin’ny olona fa maty noho ny orana sy hatsiaka izy io, kanefa rehefa nozahana, […]
« Précédent 1 … 1 010 1 011 1 012 1 013 1 014 … 1 059 Suivant »